yini i-USB3.1 HUB? | I-Huachuang Electronic
Isikhungo se-USB-C ne-USB 3.1 hub
Thola konke odinga ukukwazi mayelana nama-hubs e-USB-C nama-USB 3.1 hubs lapha. Uyini umehluko? Ingabe kukhona umehluko? I-USB Type-C yifomethi yokuxhuma eyethulwe ngonyaka ka-2015. Isixhumi esingu-Type-A, esijwayelekile isikhathi eside, sizothathelwa indawo yi-Type-C. Lawa ma-plugs mancane futhi angasetshenziswa kuzo zombili izinhlangothi - okungahle kube yinzuzo enkulu. Ungalokothi unake ukuthi ipulaki kufanele ifakwe kanjani ethekwini - vele uyifake!
Isifinyezo sezinzuzo ze-USB 3.1
ngokushesha nge-USB 3.0
20x ngokushesha kune-USB 2.0
kwehle kuyahambisana namadivayisi we-USB 3.0 & USB 2.0
ukudluliselwa kwamandla okuningana (900 mA) - ama-notebook angabizwa
Yini okufanele uyenze uma iMac noma ilaptop entsha inesixhumi sohlobo C se-USB, kodwa wonke amadivayisi wokugcina aseyi-USB 2.0 noma i-3.0? Noma uma kukhona okumbalwa kakhulu plug Slots?
Isixazululo sibizwa nge-USB-C Hub. Ama-hubs we-USB ayindlela enhle yokusebenzisa imbobo ye-USB 3.1 ku-Mac enezinhlobo ze-USB ezindala. Lokhu okulandelayo kusebenza lapha: okufushane ikhebula lehabhu nokuxhuma okumbalwa kwe-plug kukhona, ngcono ukusebenza. Ngakho-ke ochwepheshe batusa ukuthi uxhume ama-hubs ambalwa ngokulandelana kunokuba usebenzise ihabhu elinama-slots amaningi. Uhlobo lwe-USB C 3.1 hub luxhumeka kumadivayisi athile ngokuxhuma kwe-USB 3.0 noma ngaphezulu ekuxhumekeni kohlobo C lwe-USB iMac nekhompyutha noma incwadi yokubhalela. Amadivayisi amadala angasebenza kuhabhu elinjalo, kepha ngejubane nesivinini esenzelwe wona.
Ingabe isixhumi se-USB-C silingana kwikhompyuter yami yakudala?
Cha - okokufaka kwe-USB-A noma i-USB-B (Micro-USB) akuhambelani ngoba ifomethi ihluke ngokuphelele.
Ngabe isixhumi esidala se-USB-A silingana ocingweni olusha lwe-USB-C?
Cha - okokufaka kwe-USB-C kuncane kakhulu.
Ngabe iMicro-USB ne-USB-C ziyahlangana?
Cha - amafomethi wesixhumi ahlukile.
Idivayisi yakudala ye-USB 2.0 ayikwazi ukusheshiswa ngokuyisebenzisa kuhabhu lesimanje le-3.1. Ngoba ukubhuleka kuyisixhumi esibonakalayo esingenabo oxhumana nabo abadingekayo ukufinyelela iSuperSpeed ​​+ lapha. Njengokushintshwa kusuka ku-USB 2.0 kuya ku-USB 3.0, i-USB 3.0 kuya ku-USB 3.1 kuya emuva kuyahambisana. Kuzothatha isikhashana ngaphambi kokuthi kusungulwe i-USB-C ejwayelekile esetshenziswa kuma-MacBook futhi abasebenzisi bangayenza ngaphandle kwe-adaptha. Kuyaqondakala konke ukuthi izesekeli ezithengwe esikhathini esedlule kufanele zisasetshenziswa.
Izindawo zamanje ze-USB C
I-HuaChuang USB 3.1 Uhlobo C USB Hub
I-WIWU Multiport USB 3.1 C Hub
Kusuka ku-USB 1.0 kuya ku-USB 3.1 - ukuthuthukiswa okuqhubekayo
I-Universal seri Bus (i-USB) izisungule njengenqubo ejwayelekile yokubonisa futhi umsuka wayo ubuyela emuva kude kudala ebuchwephesheni bekhompyutha. Ngo-1996, inguquko yokuqala engu-1.0 yenza kwaba nokwenzeka ukuxhuma amadivaysi ambalwa, njengama-phrinta, ama-hard disk noma ama scanners, ngesixhumi esibonakalayo ngaphandle kokufaka ikhadi elibizayo le-SCSI plug-in ngaleso sikhathi noma kufanele uthenge okuhambisanayo amadivaysi okuphela. Uhlobo lwangempela lwanika amandla isilinganiso sokudlulisa esifinyelela ku-1.5 noma i-12 MB / isibili. I-Version 2.0 enegama elithi Hi-Speed ​​ilethe amandla okudluliswa kwedatha angama-60 MB / okwesibili ngonyaka ka-2000. I-USB ejwayelekile engu-3.0, ngemuva kweminyaka eyisishiyagalombili, yabiza iSuperSpeed ​​ukwanda kwejubane lokudlulisela ku-500 MB / kwesibili.
Ingabe uhlelo olusha lwe-USB lusebenza nesidala?
Into enhle kusengaphambili: Amadivayisi e-USB 2.0 nawo wonke angasebenza kusetshenziswa izisekelo ze-USB 3.0. Lokhu kusho ukuthi, ngokwesibonelo, induku yememori ene-USB 2.0 port nayo ingasebenza ku-interface ye-USB 3.0 - noma kunjalo, kunezinkinga nge-USB USB connector 3.0, njengoba ibanzi kancane futhi inenothi epuletini yomhlahlandlela. . Njengokwe-USB 2.0, i-USB 3.0 isuselwe esivinini sedivayisi ebuthakathaka. Kodwa-ke, izisekelo ze-USB 2.0 azemukeli ama-plugs we-USB 3.0 - lokhu kungenxa yoxhumana nabo.
Ngokufingqa, lokhu kusho:
Amakhebuli we-USB 3.0 awekho emuva ahambelani maqondana namadivayisi wokugcina
Izintambo ze-USB 3.0 zingaxhuma idivaysi ye-USB 3.0 kumgcini we-USB 2.0
Izintambo ze-USB 3.0 azikwazi ukuxhuma insiza ye-USB 2.0 kumgcini we-USB 2.0
Izintambo ze-USB 3.0 azikwazi ukuxhuma insiza ye-USB 2.0 kumgcini we-USB 3.0
Izintambo ze-USB 2.0 zingaxhuma idivaysi ye-USB 2.0 kumgcini we-USB 3.0
Izintambo ze-USB 2.0 azikwazi ukuxhuma insiza ye-USB 3.0 kumgcini we-USB 3.0
Izintambo ze-USB 2.0 azikwazi ukuxhuma insiza ye-USB 3.0 kumgcini we-USB 2.0
I-USB 3.1 ejwayelekile nesixhumi esisha se-USB Type-C
Ukuhambisana, iphazili yekhebula nesixhumi - Manje i-USB ejwayelekile engu-3.1 kufanele inikeze isithombe esicacile. Ngokushintshwa kusuka ku-USB 3.0 kuya ku-USB 3.1, kwethulwa ikhebula elisha lokuxhumana endaweni entsha ye-USB: Uhlobo lwesixhumi C libuyisela uhlobo lwendalo ejwayelekile engu-A futhi lungafakwa nhlangothi zombili. Inikeza nesivinini esikhulu sokuhambisa. Ngosizo lwehabhu le-USB, amadivaysi e-USB 2.0 asebenza ngohlobo lwesixhumi A futhi angasetshenziswa ekuxhumekeni kwe-USB 3.1 ngohlobo lwesixhumi C nokuphikisana nalokho. Kodwa-ke, kunezinkinga ngokuhanjiswa kwamandla lapho kuxhuma amadivaysi e-USB 3.0 ne-3.1 emachwebeni e-USB 2.0, ngoba i-USB 3.0 inyuse okwamanje kusuka ku-500 mA kuya ku-900 mA. Isixhumi i-USB-C yesidoda nayo incane kakhulu kuneyayo yohlobo A eyandulelayo. Ukuqina kwayo kungaphezu kwe-10.
I-Apple ingena esikhundleni se-Thunderbolt interface nge-USB Type-C
Isikhumulo seThunderbolt sakhiwa ngokuhlanganyela yi-Apple ne-Intel, esasisetshenziswa kakhulu kuma-Apple Macs, sathathelwa indawo ngo-2015 yi-Type C slot ene-USB 3.1. Ngalesi interface kungenzeka futhi ukuxhumanisa izikrini. Ukulungiswa kwesikrini kufika ku-5k akuyona inkinga kusixhumi. Akukacaci noma ukuthi isixhumi sesixhumi C esine-USB ejwayelekile 3.1 empeleni sizoba yini ikhebula lokushaja elijwayelekile eYurophu. NgoMashi 2014, iPhalamende laseYurophu laphasisa umthethosivivinywa ozohlinzeka ngentambo ejwayelekile yokushaja yamadivayisi eselula kusuka ngo-2017. Kuze kube yileso sikhathi, isivumelwano ngamazinga wamakheli wokushaja ngokufana singokuzithandela - lapha bonke abenzi, ngaphandle kwe-Apple, okuwukuphela kwento inkampani enentambo ye-Lightning engalandeli noma iyiphi ejwayelekile bese ipheka isobho sayo. Ngokwayo, isixhumi sohlobo C lwe-USB nge-USB 3.1 sinethuba elihle lokuzisungula njengezinga elisha ngoba isixhumi esincane sivumela ukuxhumana okuncane kumadivaysi futhi ijubane lokuhambisa selithuthukisiwe kakhulu. Ngaphezu kwalokho, isixhumi sohlobo C sinciphisa i-tangle ye-USB tangle, ngoba ingathatha isikhundla sazo zonke izinhlobo zokuxhuma ze-USB zesikhathi esedlule hhayi kuphela ngenxa yesivinini sokuxhumeka kwayo, kodwa futhi ne-900 mAh yamuva.